Okrainiana Roa Voasazy Dimy Taona Am-Ponja Noho Ny Fanohanana Ny Fisintahana Ao Amin’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2017 8:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español, Português, polski, English
Tamin'ny Alatsinainy, nosazian'ny fitsarana ao amin'ny faritra atsinanan'i Okraina, Donetsk dimy taona an-tranomaizina ny lehilahy roa noho ny fanohanana ny separatista ao amin'ny tranonkala media sosialy VKontakte. Nilaza tamin'ny fanambarana an-gazety ny biraon'ny mpampanoa lalàna ara-paritra Donetsk fa nampangain'ny fitsarana ao an–tanànan'i Sloviansk ireo lehilahy roa noho ny Fizarana faha-2 amin'ny Andininy faha-110 amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Okrainiana, “Fanohintohinana ny filaminan'ny faritra sy ny tsy fahazoana mikitikitika ny fanasamatsamahana an'i Okraina,” izay manasazy telo hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina.
Hita fa meloka noho ny fikarakarana vondrona manohana ny hetsiky ny separatista ao amin'ny VKontakte tamin'ny Febroary 2014 ireo lehilahy, samy mponina ao Sloviansk ireo—taorian'ny nanonganan'ny Revolisiona EuroMaidan ny Filoha Okraniana teo aloha Viktor Yanukovych saingy mbola talohan'ny nakan'ny separatista tohanan'ny Rosiana ny ampahany betsaka tamin'ny faritra atsinanana ao Donetsk sy Luhansk, ary anisan'izany i Sloviansk.
Nilaza ny biraon'ny mpampanoa lalàna fa niezaka nanova ny sisintanin'i Okraina ireo lehilahy ireo ary nanome “vaovao fanohanana” ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Donetsk sy Luhansk, Firenena separatista roa tohanan'ny Rosiana ao atsinanan'i Okraina, ho fanatanterahana izany tanjona izany. Ny vaovao nozarain'izy ireo manerana ny media sosialy dia “toetra anti-Okraina,” hoy ny biraon'ny mpampanoa lalàna.
Nosamborin'ny Sampam-piarovana ao Okraina ireo lehilahy roa ireo tamin'ny Aprily 2015, mba hanakanana ny hetsik'izy ireo antserasera. Nilaza ny biraon'ny mpampanoa lalàna fa nisoratra anarana tamin'ny foto-kevitra “tontolo Rosiana”, izay mikasa hanangana “Rosia goavana” ivelan'ny sisintanin'ny firenena ankehitriny ireo lehilahy roa, izay tsy niaiky ny heloka vitany nandritra ny fotoam-pitsarana.